Nhau -Kushandiswa kwezvikamu zvakasimirirwa zvecarbide
Kushandiswa kwecemented carbide kupfeka zvikamu
Nekuvandudzwa kweindasitiri yemazuva ano, zvikamu zvemakanika (senge muchina wekurima, muchina wemigodhi, muchina wekuvaka, muchina wekuchera, nezvimwewo) kazhinji unoshanda pasi pemamiriro akaoma uye akaomarara, uye nhamba huru yemidziyo yemuchina inowanzoraswa nekuda kwekupfeka uye kubvaruka. .Naizvozvo, kugona kutsvagisa uye kugadzirwa kwezvinhu zvinodzivirira kupfeka kwakakosha zvikuru pakuvandudza hupenyu hwesevhisi yezvipfeko zvinodzivirira kupfeka uye kuderedza kurasikirwa nekuda kwekupfeka.
Cemented carbide kupfeka zvikamu zvine mashandiro epamusoro, saka anoshandiswa zvakanyanya muindasitiri.Kupfeka kwakanaka kuramba uye kuomarara kwepamusoro kunoita kuti ive yakakodzera kugadzirwa kwezvikamu zvisingapfekere, zvikamu zvemakanika uye waya yekudhirowa inofa iyo inopesana nekupisa kwakanyanya, kukweshera uye ngura.Mumakore achangopfuura, simende carbide yave sarudzo iri nani yekutsiva simbi mune akasiyana siyana maindasitiri ekushandisa.
Zvikamu zvisingapfekeki zvesimende carbide idiki semuromo wepeni, yakakura semuchina wekubaya, waya yekudhirowa inofa, kana chigayo chinokunguruka chinoshandiswa muindasitiri yesimbi.Mazhinji carbide kupfeka zvikamu uye maturusi ekuchera anogadzirwa zvakananga kubva ku tungsten cobalt.Fine-grained uye ultra-fine-grained cemented carbides ari kuwedzera uye anokosha mukupfeka-resistant accessories uye midziyo yekucheka yekucheka simbi, non-ferrous alloys, uye huni.
Iko kushandiswa kwecemented carbide kupfeka zvikamu kunotevera:
Carbide kupfeka zvikamu mechanical chisimbiso;mumapombi, compressors uye agitators, carbide seals inoshandiswa semakanika chisimbiso nzvimbo.Panguva imwecheteyo, simende carbide inoshandiswa zvakanyanya mumafuta ekunatsa, petrochemical zvidyarwa, fetireza yakakwana michina uye maindasitiri ekugadzira mishonga.
Carbide Wear Parts Kuti isangane nezvinodiwa zvesimbi waya yekudhirowa indasitiri, kambani yedu inogadzira tungsten carbide waya, tungsten carbide bar uye waya yekudhirowa chubhu.Kuoma kwepamusoro uye kuomarara kunoita kuti zvigadzirwa izvi zvikwanise kumira tembiricha yakakwira uye kumanikidzwa.Iko kushandiswa kwezvikamu zvinodzivirira kupfeka nepamusoro kupfeka kuramba kunogona kuburitsa mhando yemhando yechigadzirwa, kurapwa kwepamusoro uye kurongeka kwedimensional, uye zvakare inogona kurebesa hupenyu hwesevhisi yechigadzirwa.
Kushandiswa kwezvikamu zvecarbide kupfeka muindasitiri yekuruka uye yekuruka;kunyanya muindasitiri yekuruka yejute inoratidzwa mumhete yesimbi.Izvi ndezvekudzivirira kuzunguzika uye kutamiswa kwewaya yejute kana ichitenderera nekumhanya kukuru, uye kuita kuti muchina ushande wakasununguka uye zvakanaka.
Zvikamu zvinodzivirira kupfeka zvakagadzirwa necemented carbide zvinosanganisira ma nozzles, njanji yegwara, plungers, mabhora, matinji ekutaira, mapuranga emagejo echando zvichingodaro.